जङ्गलमा भेटियो नवजात शिशु : भेटाउनेलाई नै लाग्यो यस्तो आरोप (भिडियो हेर्नुस्) – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/जङ्गलमा भेटियो नवजात शिशु : भेटाउनेलाई नै लाग्यो यस्तो आरोप (भिडियो हेर्नुस्)
बागलुङ – घटना बाग्लुगंको हो । एक जना महिलाले जंगलमा एउटा नवजात शिशु रुँ’दै गरेको अवस्थामा फेला पारिन् । कसैले जन्माएर जंगलमा फा’लेको बच्चा जिवितै थियो । एक वृद्ध महिलाले त्यहाँ त बच्चा रो’एजस्तो गरेर डराउन दिएको छ भन्न गएपछि उनी त्यहाँ के रहेछ भनेर हेर्न गएकी थिइन् । त्यहाँ जाँदा उनले एउटा नवजात शिशुलाई जंगलमा फा’लिएको अवस्थामा देखिन् । बच्चाको शरिरमा झिंगा भ’न्किएको थियो, शरिर हरियो हुन लागिसकेको अवस्थामा उनले त्यो शिशुलाई फेला पारेपछि उठाइन् । सफा गरिन् अनि अरुलाई पनि बोलाइन् ।
अहिले ति नवजात शिशु ठूला भइसकेका छन् । उनले शिशु फेला पारेर प्रहरीलाई जिम्मा दिएकी थिइन् । उनको संरक्षणकर्ताको संरक्षणमा पालन पोषण भइरहेको छ । त्यो खबर सुनेर उनलाई निकै खुसीलाग्छ । तर अहिले आफुलाई बच्चा जिवितै फेला पारेको भनेर एउटा आरोप लाग्ने गरेको छ । जसका कारणले उनलाई दुख लाग्छ । गाउँमा बच्चा फेला पारेर दिएकाले उनलाई तीन लाख रुपैया इनाम दिएको भन्दै हल्ला चलाइए पछि उनी दुखी भएकी छन् । गाउँमा यस्तो अनावश्यक हल्ला चलेछ । कसैले मलाई आएर पनि सोधे । कसले मलाई इनाम दिन्थ्यो होला र ? उनले दुखी हुँदै भनिन्, कसले यस्तो हल्ला चलाएको होला ?
उनले आफुले भेटाउँदा ति नवजात शिशु एक दिन अघि नै कसैले जंगलमा फा’लेको हुन सक्ने बताएकी छन् । बच्चाको अवस्था हेर्दा निकै नाजुक थियो, उनले भनिन्, अघिल्लो दिन नै जंगलमा फा’लेको जस्तो लागेको छ । अहिले ति शिशुका बुवा भने प्रहरी हिरासतमा छन् । बच्चा जन्माएर फा’ल्ने युवती भने वाहिरै छन् । उनी भन्छिन्, वुवालाई मात्र सजाय किन दिएको होला? त्यसरी सन्तान फा’ल्ने आमालाई पनि कारवाही हुनुपर्छ । उनले त्यो शिशु ठूलो भएर आफुलाई जंगलमा फा’ल्ने आमावुवालाई कारवाही गरेको आफुले देख्न चाहेको बताएकी छन् । त्यो बच्चा ठूलो भएर आफ्ना आमाबुवालाई कारवाही गरोस् उनले भनिन्, यो देशको प्रधानमन्त्री भएको देख्न पाउँ मेरो इच्छा त्यही छ । उनले त्यो बच्चाको आफुलाई निकै याद आउने पनि बताएकी छन् ।